Kuleylka kuleylka kuleylka kuleylka leh kuleyliyaha kuleylka dhexdhexaadka ah
Qalab loogu talagalay Adkeynta adkaynta gu 'leh qaab jiingad ah ama shinni leh. Qalabku wuxuu leeyahay nidaam taakuleyn wareeg ah iyo nidaamka kuleylka kuleylka. Nidaamka taageerada wareegga waxaa loogu talagalay in lagu taageero guga halka guga lagu kululeeyo nidaamka kululaynta kuleylka. Ku nidaamka kuleylka induction wuxuu leeyahay nidaam isku xirxira is-gelinta oo leh nidaam gariirad. Nidaamka gariiradu wuxuu leeyahay gobol fidsan oo loogu talagalay inuu helo guga iyo inuu kululeeyo guga halka guga lagu taageerayo nidaamka taageerada wareegga.
Meelaha gariiradda ama ilaha caleenta waxaa lagu sameeyaa isbeddelka kuleylka ee astaamaha birta. Sababtoo ah astaamaha birta guga, waxaa jira shuruudo gaar ah oo loogu talagalay kuleylka kuleylka iyo waqtiga inta lagu jiro howlaha kuleylka. Marka laga reebo kululaynta ka hor inta aan loo rogin gariiradda guga ama loo rogin ilo wargeysyada, waxaa sidoo kale jira codsiyo kale oo daaweyn kuleyl ah oo kala duwan, sida kuleylka xarigga guga, iyo birta qallajinta dusha sare ee birta. Haysashada astaamaha kuleylka degdega ah, dhaqso u xira, xakamaynta wax soo saarka korantada saxda ah, iyo kala duwanaanta kaladuwanaanta, HLQ korontada kululaynta induction wuxuu aad ugu habboon yahay kuleylka kuleylka kuleylka ee birta guga, gaar ahaan warshadaha qaybaha gawaarida ee ku lug leh ilo caleenta ama dhirta waxsoosaarka guga oo xamuul qaada. Naqshadeeyay xirfadlayaasha HLQ, ka Qalabka kululaynta induction dhammaantood waxay si fiican ugu qalabaysan yihiin faa'iidooyinka keydinta tamarta, bilowga degdegga ah / joogsiga, 24 saac ee wareegga shaqada, awood sare, otomaatig sare, waxtarka sare, dayactirka fudud, iyo nolosha muddada dheer la isticmaalo. Kuleyliyaheena kuleyliyaha ayaa si ballaaran u aqoonsaday macaamiisha warshadaha wax soo saarka birta guga.
Nidaamka qallajinta indha-indheynta birta waa nidaam caadi ah oo loo adeegsado soo-saarka guga. Mid ka mid ah geeddi-socodka qallafsanaanta guud wuxuu ka kooban yahay foornada hawo dhaqameed. Hawlaha qallafsan ee noocan ahi aad ayey u gaabiyaan. Ilaha waxay ka samaysan karaan biro kala duwan (tusaale ahaan, birta aan xarka lahayn, birta kaarboonka, birta daloolka ah, iwm.). Marka birta gu'ga si qumman loo adkeeyo oo loo adkeeyo, xuduudaha gaar ahaaneed ee birta ah sida adkaanta iyo qaab dhismeedka micro-ga waa la gaari karaa.
Marka gu 'ay adkaato foornada hawo-dhaqameed dhaqameed, guga waxaa marka hore la dhigaa foornada lagu diyaariyo heerkul gaar ah muddo cayiman. Intaa wixii ka dambeeya, guga ayaa laga saaraa oo lagu bakhtiiyaa saliid ama dareeraha kale ee damiya. Kadib geedi socodkan adag ee bilowga ah, adkaanta guga guud ahaan way ka sarreysaa sidii la rabay. Sidan oo kale, guga guud ahaan waxaa la hoos galiyaa nidaam xanaaq badan illaa guga ka helayo sifooyinka jirka la doonayo. Marka guga si sax ah loo shaqeeyo, qaar ka mid ah qaab dhismeedka macdanta birta ah ee birta ayaa loo beddelaa martensite xanaaq badan iyadoo carbides badankood la kala diray si loo bixiyo qaabdhismeedka aasaasiga ah ee guga iyo adkaanta dusha sare ee guga.
Nidaam kale oo loo isticmaalo adkaanta ilo waa kululaynta induction. Nidaamka kuleylinta kuleylka wuxuu ku yimaadaa adoo soo jiidaya aaladda elektromagnetic-ka ee maaddada la adeegsado guga. Mawjadaha 'Eddy' waxaa lagu soo saaraa walxaha la isku habeeyo ee diidmadoodu keento kuleylka Joule. Kuleylka kuleylka ayaa loo isticmaali karaa in lagu kululeeyo birta barta dhalaashadeeda haddii loo baahdo taas oo ka badan inta ku filan si loo yareeyo badeecada.
Nidaamka kuleylinta induction wuxuu ku siin karaa waqti kuleyl dhaqso badan marka loo barbardhigo kululaynta foornooyinka hawo-dhaqameedka, iyo habka kuleylinta induction wuxuu fududeyn karaa maareynta maareynta ilaha, waxayna suurtogal u tahay inay awood u yeelato otomatiga maareynta maaddada guga habka adag. In kasta oo kululaynta induction ay leedahay faa iidooyin dhowr ah marka loo eego foornooyinka hawo-dhaqameedka dhaqameedka, kuleylka kuleylinta ilaha waxay leeyihiin dhibaatooyin la siman kululaynta guga inta lagu jiro dhererka guga, kululaynta dhamaadka guga, iyo ilaalinta kululaynta kuleylka induction waxtarka.
Categories Technologies Tags iibso kululeeyaha guga induction, kululaynta kululaynta guga, Qalabka kululaynta induction, gaaska kuleylka ah, adkaanshaha guga induction, kululeeyaha guga induction, kululaynta guga induction, biraha kululeeyaha induction guga, guga adkaansho, kululaynta guga, guga adkaanta Post navigation